समाचार - यांत्रिक, थर्मल र रासायनिक तनाव अन्तर्गत sealants को व्यवहार को अप्टिकल विश्लेषण
विकृत दाँत को हटाउन को लागी निश्चित उपकरण दुबै किशोर र वयस्क को लागी orthodontics मा प्रयोग गरीन्छ। आज पनि, गाह्रो मौखिक स्वच्छता र multibracket उपकरणहरु (एमबीए) को साथ थेरापी को दौरान पट्टिका र खाद्य अवशेषहरु को संबद्ध बृद्धि एक अतिरिक्त क्षय जोखिम को प्रतिनिधित्व गर्दछ1। Demineralization को विकास, तामचीनी मा सेतो, अपारदर्शी परिवर्तन को कारण सेतो धब्बा घाउ (WSL) को रूप मा जानिन्छ, एमबीए संग उपचार को दौरान एक लगातार र अवांछनीय साइड इफेक्ट हो र मात्र ४ हप्ता पछि हुन सक्छ।
हालैका वर्षहरुमा, बढेको ध्यान buccal सतहहरु को सील र विशेष sealants र फ्लोराइड वार्निश को उपयोग को लागी भुक्तान गरिएको छ। यी उत्पादनहरु लामो समय सम्म क्षयरोग रोकथाम र बाह्य तनावहरु को बिरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। विभिन्न निर्माताहरु एक आवेदन पछि and र १२ महिना को बीच सुरक्षा को वचन दिन्छन्। वर्तमान साहित्य मा विभिन्न परिणाम र सिफारिशहरु निवारक प्रभाव र यस्तो उत्पादनहरु को आवेदन को लागी लाभ को बारे मा पाउन सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ तनाव को लागी उनीहरुको प्रतिरोध को बारे मा विभिन्न बयानहरु छन्। पाँच पटक प्रयोग गरिएका उत्पादनहरु सामेल आधारित सीलेन्ट्स प्रो सील, लाइट बण्ड (दुबै रिलायन्स Orthodontic उत्पादनहरु, इटास्का, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका) र Clinpro XT वार्निश (3 एम Espe एजी दन्त उत्पादनहरु, Seefeld, जर्मनी) को शामिल गरीएको थियो। साथै दुई फ्लोराइड वार्निश फ्लोर प्रोटेक्टर (Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen, जर्मनी) र Protecto CaF2 नैनो एक-स्टेप-सील (BonaDent GmbH, फ्रैंकफर्ट/मुख्य, जर्मनी) थिए। एक flowable, प्रकाश-उपचार, radiopaque nanohybrid कम्पोजिट सकारात्मक नियन्त्रण समूह (Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent, Ellwangen, जर्मनी) को रूप मा प्रयोग गरीएको थियो।
यी पाँच बारम्बार प्रयोग गरिएका सीलेन्टहरु को यांत्रिक दबाव, थर्मल बोझ र रासायनिक जोखिम डिमनेरलाइजेशन र फलस्वरूप WSL को अनुभव पछि उनीहरुको प्रतिरोध को दिशा मा विट्रो मा जांच गरीएको थियो।
निम्न परिकल्पनाहरु परीक्षण गरिनेछ:
१. शून्य परिकल्पना: मेकानिकल, थर्मल र रासायनिक तनावहरु को जांच गरीएको sealants लाई असर गर्दैन।
2. वैकल्पिक परिकल्पना: यांत्रिक, थर्मल र रासायनिक तनाव sealants जाँच प्रभावित।
सामग्री र विधि
१ 192 २ बोवाइन अगाडिको दाँत यो भिट्रो अध्ययन मा प्रयोग गरीएको थियो। बोवाइन दाँतहरु वध जनावरहरु (वधशाला, Alzey, जर्मनी) बाट निकालीएको थियो। गोजातीय दाँत को लागी चयन मापदण्ड क्षय थियो- र दोष मुक्त, वेस्टिबुलर तामचीनी दाँत को सतह को रंग र दाँत को मुकुट को पर्याप्त आकार को बिना रंग4। भण्डारण 0.5% क्लोरामाइन बी समाधान मा थियो5, 6। कोष्ठक आवेदन अघि र पछि, सबै गोजातीय दाँत को भेस्टिबुलर चिकनी सतहहरु अतिरिक्त एक तेल र फ्लोराइड मुक्त पोलिश पेस्ट (Zircate Prophy पेस्ट, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, जर्मनी) संग सफा गरीएको थियो, पानी संग धोईयो र हावा संग सुकेको5। निकल मुक्त स्टेनलेस स्टील बाट बनेको धातु कोष्ठक अध्ययन को लागी प्रयोग गरीएको थियो (मिनी स्प्रिन्ट कोष्ठक, Forestadent, Pforzheim, जर्मनी)। सबै कोष्ठक UnitekEtching जेल, Transbond XT लाइट इलाज चिपकने वाला प्राइमर र Transbond XT लाइट इलाज Orthodontic चिपकने (सबै3M Unitek GmbH, Seefeld, जर्मनी) प्रयोग गरीयो। कोष्ठक आवेदन पछि, भेस्टिबुलर चिकनी सतहहरु कुनै पनी चिपकने वाला अवशेष हटाउन को लागी Zircate Prophy पेस्ट संग सफा गरीयो।5। मेकानिकल सफाई को समयमा आदर्श क्लिनिकल स्थिति अनुकरण गर्न को लागी, एक २ सेमी लामो एकल आर्कवायर टुक्रा (Forestalloy नीलो, Forestadent, Pforzheim, जर्मनी) एक preformed तार ligature (०.२५ मिमी, Forestadent, Pforzheim, जर्मनी) संग कोष्ठक को लागी लागू गरिएको थियो।
यस अध्ययन मा कुल पाँच sealants को अनुसन्धान गरीएको थियो। सामग्री को चयन मा, सन्दर्भ एक वर्तमान सर्वेक्षण को लागी बनाईएको थियो। जर्मनी मा, 985 दन्त चिकित्सकहरु लाई आफ्नो orthodontic अभ्यासहरु मा प्रयोग गरीएको sealants को बारे मा सोधिएको थियो। सबैभन्दा उल्लेख ग्यारह सामाग्री को पाँच बाहिर चयन गरिएको थियो। सबै सामाग्री सख्ती बाट निर्माता को निर्देशन अनुसार प्रयोग गरीएको थियो। टेट्रिक EvoFlow सकारात्मक नियन्त्रण समूह को रूप मा सेवा।
औसत मेकानिकल लोड अनुकरण गर्न एक आत्म विकसित समय मोड्युल को आधार मा, सबै sealants एक मेकानिकल लोड को अधीनमा थिए र पछि परीक्षण गरीयो। एक इलेक्ट्रिकल टूथब्रश, ओरल-बी प्रोफेशनल केयर १००० (प्रोक्टर एण्ड ग्याम्बल जीएमबीएच, श्वालबच एम टुनस, जर्मनी), यो अध्ययन मा मेकानिकल लोड को नक्कल गर्न को लागी प्रयोग गरीएको थियो। एक दृश्य दबाव जाँच illuminates जब शारीरिक सम्पर्क दबाव (2 एन) पार भयो। ओरल-बी प्रेसिजन क्लीन EB २० (Procter र Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, जर्मनी) टूथब्रश टाउको को रूप मा प्रयोग गरीएको थियो। ब्रश टाउको प्रत्येक परीक्षण समूह (ie6 पटक) को लागी नवीकरण गरिएको थियो। अध्ययन को समयमा, एउटै टूथपेस्ट (Elmex, GABA GmbH, Lörrach, जर्मनी) सधैं क्रम मा प्रयोग गरीयो परिणाम मा यसको प्रभाव लाई कम गर्न को लागी7। एक प्रारम्भिक प्रयोग मा, टूथपेस्ट को औसत मटर आकार को मात्रा मापन र एक microbalance (पायनियर विश्लेषणात्मक सन्तुलन, OHAUS, Nänikon, स्विट्जरल्याण्ड) (३5५ मिलीग्राम) को प्रयोग गरी गणना गरीएको थियो। ब्रश टाउको आसुत पानी संग भिजेको थियो, ३5५ मिलीग्राम औसत टूथपेस्ट संग गीला र निष्क्रिय वेस्टिबुलर दाँत सतह मा स्थित। मेकानिकल लोड लगातार दबाव र पारस्परिक अगाडि र ब्रश टाउको को पछाडि आन्दोलन संग लागू भएको थियो। जोखिम समय दोस्रो मा जाँच गरीयो। बिजुली टूथब्रश सधैं सबै परीक्षण श्रृंखला मा एउटै परीक्षक द्वारा निर्देशित थियो। दृश्य दबाव नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न को लागी कि शारीरिक सम्पर्क को दबाव (2 N) लाई पार गरीएको थिएन। प्रयोग को 30 मिनेट पछि, टूथब्रश पूरै लगातार र पूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न को लागी रिचार्ज गरिएको थियो। ब्रश गरे पछि, दाँत २० सेकेन्ड को लागी पानी को एक हल्का स्प्रे संग सफा गरीयो र त्यसपछि हावा संग सुकाइयो8.
समय मोड्युल प्रयोग गरीएको छ कि औसत सफाई समय २ मिनेट हो भन्ने धारणा मा आधारित छ9, 10। यो क्वाड्रन्ट प्रति 30 s को सफाई समय संग मेल खान्छ। एक औसत दन्त को लागी, २ teeth दाँत को एक पूरा दन्त, अर्थात् ad दाँत प्रति चतुर्थांश, मानिन्छ। दाँत प्रति दन्त ब्रश को लागी ३ सान्दर्भिक दाँत सतहहरु छन्: मुख, occlusal र मौखिक। Mesial र टाढाको अनुमानित दाँत सतहहरु दाँत फ्लोस वा समान जस्तै सफा गर्नुपर्छ तर सामान्यतया टूथब्रश को लागी सुलभ छैन र यसैले यहाँ उपेक्षा गर्न सकिन्छ। 30 s को एक क्वाड्रन्ट प्रति सफाई समय संग, प्रति दाँत 4.29 s को एक औसत सफाई समय मान्न सकिन्छ। यो दाँत सतह प्रति 1.43 s को समय संग मेल खान्छ। सारांश मा, यो मान्न सकिन्छ कि सफाई प्रक्रिया प्रति एक दाँत सतह को औसत सफाई समय लगभग छ। १.५ सेकेन्ड यदि कसैले भेस्टिबुलर दाँत को सतह एक चिकनी सतह सीलेन्ट संग उपचार मा विचार गर्दछ, औसत मा ३ s को एक दैनिक सफाई लोड दैनिक दुई पटक दाँत सफाई को लागी मान्न सकिन्छ। यो प्रति हप्ता २१ s को अनुरूप हुनेछ, s४ s प्रति महिना, ५०४ s हरेक months महिना र चाहना अनुसार जारी राख्न सकिन्छ। यस अध्ययन मा १ दिन, १ हप्ता, weeks हप्ता, ३ महिना र months महिना पछि सफाई जोखिम को नक्कल र अनुसन्धान गरीएको थियो।
क्रम मा मौखिक गुहा र सम्बन्धित तनाव मा हुने तापमान मतभेद अनुकरण गर्न, कृत्रिम बुढेसकाल एक थर्मल साइक्लर संग अनुकरण गरिएको थियो। यस अध्ययन मा थर्मल साइक्लि load लोड (सर्कुलेटर DC10, थर्मो Haake, Karlsruhe, जर्मनी) ५ ° C र ५५ between C बीच ५००० चक्र मा र एक विसर्जन र ड्रिपि time समय ३० s प्रत्येक को प्रदर्शन र सिलर को उमेर को अनुकरण गरीएको थियो। आधा बर्ष को लागी11। थर्मल स्नान आसुत पानी संग भरिएको थियो। प्रारम्भिक तापमान पुग्न पछि, सबै दाँत नमूनाहरु चिसो पूल र तातो पूल को बीच 5000 पटक दोलन। विसर्जन समय प्रत्येक 30 एस थियो, एक 30 एस ड्रिप र स्थानान्तरण समय पछि।
मौखिक गुहा मा sealants मा दैनिक एसिड हमला र खनिज प्रक्रियाहरु अनुकरण गर्न को लागी, एक पीएच परिवर्तन जोखिम बाहिर राखिएको थियो। चयन समाधानहरु Buskes थिए12, 13समाधान साहित्य मा धेरै पटक वर्णन गरीएको छ। Demineralization समाधान को पीएच मान ५ हो र remineralization समाधान को 7. हो। remineralization समाधान को घटक क्याल्सियम डाइक्लोराइड-२-हाइड्रेट (CaCl2-2H2O), पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट (KH2PO4), HE-PES (1 M ), पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (१ एम) र एक्वा डेस्टिलाटा। Demineralization समाधान को घटक क्याल्सियम डाइक्लोराइड -2-हाइड्रेट (CaCl2-2H2O), पोटेशियम dihydrogen फास्फेट (KH2PO4), methylenediphosphoric एसिड (MHDP), पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (10 M) र एक्वा destillata छन्।7दिने pH- साइकल चलाइएको थियो5, 14। सबै समूहहरु प्रति दिन 22-h remineralization र 2-h demineralization (11 h-1 h-11 h-1 h बाट वैकल्पिक) को अधीनमा थिए, पीएच साइक्लि prot प्रोटोकल पहिले नै साहित्य मा प्रयोग गरीएको मा आधारित।15, 16। दुई ठूला गिलास कटोरा (२० × २० × cm सेमी, १५०० मिलीलीटर ३, सिम्याक्स, बोहेमिया क्रिस्टल, सेल्ब, जर्मनी) लाई ढक्कन संगै कन्टेनर को रूप मा छनौट गरियो जसमा सबै नमूनाहरु संगै राखिएको थियो। कभर मात्र हटाइयो जब नमूना अन्य ट्रे मा परिवर्तन गरीयो। नमूना गिलास भाँडा मा एक स्थिर pH मान मा कोठा को तापमान (20 ° C ± 1 ° C) मा भण्डारण गरीएको थियो5, 8, 17। समाधान को पीएच मान एक पीएच मीटर (३५१० पीएच मीटर, Jenway, Bibby वैज्ञानिक लिमिटेड, एसेक्स, यूके) को साथ दैनिक जाँच गरीएको थियो। प्रत्येक दोस्रो दिन, पूरा समाधान नवीकरण गरिएको थियो, जसले pH मान मा एक सम्भावित गिरावट लाई रोक्यो। जब एक पकवान बाट अर्को डिश बाट नमूनाहरु परिवर्तन, नमूनाहरु सावधानीपूर्वक आसुत पानी संग सफा गरीयो र त्यसपछि एक एयर जेट संग सुकेको समाधान को मिश्रण बाट बच्न को लागी। 7-दिन पीएच साइक्लि After पछि, नमूना हाइड्रोफोरस मा भण्डारण गरीएको थियो र सीधा माइक्रोस्कोप मुनि मूल्याated्कन। यस अध्ययनमा अप्टिकल विश्लेषण को लागी VHX-1100 क्यामेरा संग डिजिटल माइक्रोस्कोप VHX-1000, VHZ-100 प्रकाशिकी संग चल तिपाई S50, मापन सफ्टवेयर VHX-H3M र उच्च संकल्प १-इन्च एलसीडी मोनिटर (Keyence GmbH, Neu- Isenburg, जर्मनी) प्रयोग गरीएको थियो। १ examination व्यक्तिगत क्षेत्रहरु संग दुई परीक्षा क्षेत्रहरु प्रत्येक प्रत्येक दाँत, एक पटक incisal र कोष्ठक आधार को apical को लागी परिभाषित गर्न सकिन्छ। नतिजाको रूपमा, प्रति दाँत ३२ क्षेत्रहरु र सामग्री प्रति ३२० क्षेत्रहरु को एक परीक्षण श्रृंखला मा परिभाषित गरीएको थियो। सबै भन्दा राम्रो दैनिक उपयोगी क्लिनिकल प्रासंगिकता र नग्न आँखा संग सीलेन्ट को दृश्य मूल्यांकन को दृष्टिकोण को लागी, प्रत्येक व्यक्तिगत क्षेत्र डिजिटल माइक्रोस्कोप को तहत एक 1000 × आवर्धन संग देखीएको थियो, नेत्रहीन मूल्यांकन र एक परीक्षा चर को लागी तोकिएको थियो। परीक्षा भेरिएबल ० थियो: सामग्री = जाँचिएको क्षेत्र पूरै सीलिंग सामग्री संग कभर छ, १: दोषपूर्ण सीलेन्ट = जाँचिएको क्षेत्र सामग्री को एक पूर्ण हानि वा एक बिन्दु मा काफी कमी देखाउँछ, जहाँ दाँत सतह देखिने हुन्छ, तर एक संग सीलेन्ट को शेष तह, २: सामाग्री हानि = जाँचिएको क्षेत्र एक पूरा सामाग्री हानि देखाउँछ, दाँत सतह उजागर छ वा *: मूल्या be्कन गर्न सकिदैन = जाँचिएको क्षेत्र अप्टिकल पर्याप्त प्रतिनिधित्व गर्न सकिदैन वा सीलर पर्याप्त लागू छैन, तब यो परीक्षण श्रृंखला को लागी क्षेत्र असफल।